Fatim-behivavy voarasarasa. Mpiasana hotely iray hanaovana fanadihadiana ao Toamasina momba ny fahitana ity fatim-behivavy novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ity. Voalaza fa fiara iray no nanary ny razana teo an-tokotanin’ilay trano fandraisam-bahiny. Mbola ao amin’ny Hopitalibe Toamasina kosa ny fatiny. Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana ka aorian’izay ny hahafantarana ny marina rehetra momba ity raharaha vonoan’olona ity.
Dahalo miisa 100 nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika no tompon’antoka tamin’ny fanafihana tao Andavanimamba Ianakafy Betroka, afakomaly. Lasan’ireo dahalo tamin’izany ny omby miisa 300, saingy efa tafaverina amin’ny tompony taorian’ny fanarahan-dia nataon’ny fokonolona nampian’ny zandary tany an-toerana. Nangataka helikoptera hahafahana manenjika ireo dahalo ny zandary satria miverina mirongatra ny asan-dahalo tato ho ato izay.
Tovovavikely vao 3 taona monja, naolan’ny raim-pianakaviana iray 43 taona tany Beraketa Ampanihy Andrefana, ny 9 febroary hariva lasa teo. Simba tanteraka ilay zazakely noho ity fihetsika feno habibiana nataon’ilay nahavanon-doza.